Kedu ihe bụ HTTPS? | Martech Zone Mkpebiri
Martech Zone » Mkpebiri » Acronyms na-amalite na H	» HTTPS
HTTPS bụ okwu mkpọ okwu maka Protocol Nyefee Hypertext (echekwabara).
Mgbatị nke Protocol Nyefee Hypertext. A na-eji ya maka nzikọrịta ozi echekwara na netwọk kọmputa, a na-ejikwa ya na ịntanetị. Na HTTPS, a na-ezobe ụkpụrụ nzikọrịta ozi site na iji Transport Layer Security ma ọ bụ na mbụ, Secure Sockets Layer.